တရုတ်သံမဏိဆန်ခါးများကိုသွန်းလောင်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွမ်းအင်မီးဖိုချောင်သုံးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံ ၀ တ်ဆင်သည် Xingtejia
Pallet Cars တွင်အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ တ်ဆင်ပါ
မီးဖိုထဲလိပ်, အလွိုင်းသွန်း ...
ဆန်ခါဘားနှင့်ဘေးထွက်မြို့ရိုး, ငါတို့ ...
CRUSHER LINERS Ball Mill လီ ...
XTJ သည် ၁၂ နှစ်ကျော်ဆန်ခါဘားထုတ်လုပ်မှုတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောထိပ်တန်းသွန်းလောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားရှိနိုင်ငံများစွာသို့ Grate Bars များကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ပုံနှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုသာတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အားပြီးပြည့်စုံသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
1. Casting လုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း
2. သံမဏိတန်း: GX130CrSi29 (1.4777) (သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်)
သွန်း၏ 3. ရှုထောင်သည်းခံစိတ်: DIN EN ကိုက ISO 8062-3 တန်း DCTG8
သွန်း၏ 4. ဂျီ ical မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ကို ISO 8062 - တန်း GCTG 5
၅။ အသုံးပြုခြင်း။ စွမ်းအင်လောင်ကျွမ်းသောစက်ရုံများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း။
အမှိုက်သရိုက်များသည်ယခုအခါအလွန်လေးနက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ကိုအမှိုက်ပုံးသည်လတ်တလောတွင်အများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုသမှုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံများစွာသည်ဤအချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်လာကြသည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်များမီးရှို့စက်ရုံများတည်ဆောက်ရာတွင်ငွေအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုများစွာတိုးတက်စေရုံသာမကဘဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းစွန့်ပစ်အမှိုက်များမီးရှို့ခြင်းတွင်ဆန်ခါအရက်ဆိုင်များသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားပြီးအလွန်ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အရည်အသွေးနိမ့်ဆန်သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး၎င်း၏သက်တမ်းသည်အလွန်တိုတောင်းသည်။ သင်မကြာခဏကအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။
သို့သျောလညျး, 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ငါတို့သင်တို့အဘို့အပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်သံမဏိအဆင့်အသုံးပြုသည်။ (၎င်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ )
သံမဏိ GX130CrSi29 (1.4777) ၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု% - EN 10295-2002
၁.၂ - ၁.၄
၁ - ၂.၅
max ကို 0.035
max ကို 0.03
၂၇ - ၃၀
သံမဏိ GX40CrNiSi27-4 (1.4823) ၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု% - EN 10295-2002
၀.၃ - ၀.၅
max ကို 0.04
၂၅ - ၂၈
သံမဏိ GX40CrNiSi25-20 (1.4848) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု%: EN 10295-2002
၁၉ - ၂၂
၂၄ - ၂၇
သံမဏိ GX40CrNiSi25-12 (1.4837) ၏ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု% EN 10295-2002
၁၁ - ၁၄
စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ (ASTM A297 အဆင့်နာရီ) 1.4837 UTS: Min 75 Ksi / 515 Mpa
YS: Min-35 Ksi / 240 Mpa
elongation:2in အတွက်: Min 10%
မာကျော: Min 200 BHN (နမူနာ3နေရာများ) "
Microstructure / Metallography စွန့်ကြဲကာဗိုက်ပါဝင်သောအဓိကအား Austenitic ဖွဲ့စည်းပုံ
SoundnessTest / X-Ray သို့မဟုတ် UT ASTM E446 အဆင့် II နှုန်း RT
ASTM A609 အဆင့် II နှုန်း UT
NDT / LPI သို့မဟုတ် MPI MPT ASTM E709 / E125 အဆင့် II နှုန်းအရ MPI
ASTM E165 အဆင့် ၂ အရ LPI "
နောက်ဆုံး Visual စစ်ဆေးခြင်း ASTM A802 အဆင့် II ကို
အမျိုးမျိုးသော OEM ဆန်ခါအရက်ဆိုင်
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက်, XTJ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုအရှိဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်နှင့်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းကိုပေးပါမည်။
နောက်တစ်ခု: CRUSHER LINERS Ball Mill Liners
No.6 Jianghe Road, Jingjiang City, Jiangsu Province, China